Igbo, John: Lesson 093 - Ụwa kpọrọ Kraist na ndị na-eso ụzọ ya asị (Jọn 15:18 - 16:3) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 093 (The world hates Christ)
3. Ụwa kpọrọ Kraist na ndị na-eso ụzọ ya asị (Jọn 15:18 - 16:3)
18 Ọ bụrụ na ụwa akpọọ gị asị, ị maara na ọ kpọrọ m asị tupu ọ kpọọ gị asị. 19 Ọ bụrụ na ị bụ nke ụwa, ụwa ga-ahụ onwe ya n'anya. Ma n'ihi na unu esiteghi n'uwa, ebe Mu onwem rọputara unu n'uwa, n'ihi nka uwa nākpọ unu asì. 20 Cheta okwu m gwara gị: 'Ohu adịghị aka onyenwe ya.' Ọ bụrụ na ha akpagbu m, ha ga-akpagbukwa gị. Ọ bụrụ na ha edebe okwu m, ha ga-edebekwa nke gị.
Mgbe Jizos gosiputara nmekorita zuru oke nke ya na Chineke, ma buru amuma mbo nke Mo nke Consolation, o kwadebere ha iji diri onu nke uwa megide ha.
Ụwa na-emegide mkpakọrịta Ndị Kraịst. Iwu ịkpọasị na ụwa, ma ịhụnanya hụrụ ncheta Ndị Kraịst. Jizos anapughi ndi ozo site na uzo di iche iche nke ihe ndi choro iburu ha rue agwaetiti nke nwere obi uto. Ọ na-eziga ha n'ime ọnọdụ ọjọọ, maka ịhụnanya ya iji merie ịkpọasị siri ike. Ozi a abughi picnic, ma mgba nke ime mmụọ. Ndị kwadoro ịhụnanya na-eche ihu, iwe na ịsọ egwu mgbe ha na-eje ozi, ọ bụghị n'ihi mmejọ nke onwe ha, kama na-esite ná mmegide nke mmụọ ọjọọ kpaliri megide okwu Jizọs. Onye nwe ha, onye zuru oke n'ah'anya na amamihe zutere iru iro ahụ na ọnwụ. N'agbanyeghị mkpagbu a siri ike, ọ gbapụghị n'ọgbọ agha ma ọ bụ hapụ ụwa, ma ọ hụrụ ndị hụrụ ya n'anya n'anya.
Ọ dịghị onye n'ime anyị bụ mmụọ ozi; obi anyị na-eche echiche ọjọọ. Ma site na amara nke Kraist, mmuo ohuru abiakwasi anyi.
Nchegharị pụtara mgbanwe nke uche. Onye amuru site na Mo-ayi abughi nke uwa, kama site n'aka Onye-nwe. Ọ họọrọ anyị n'ụwa a.
Okwu ahụ bụ "Chọọchị" n'asụsụ Grik pụtara nzukọ nke ndị a họọrọ ma kpọọ ụwa ka ha buru ibu ọrụ. Ya mere ụwa na-ele Chọọchị anya dị ka ihe arụ. Nkewa nke a na-akpata oke ngbawa na nhụjuanya dị ukwuu n'ime ezinụlọ dịka Jizọs nwetara (Jọn 7:2-9). Na steeti a, onye na-anọgide na Kraịst chọrọ gbakwunye amamihe na ịdị umeala n'obi iji die ịtachi obi na mkpagbu. Ọ bụrụ na ịchọta onwe gị n'ọnọdụ ndị dị otú a, echefula na Jizọs mere otu ihe n'enweghị ihe kpatara ya. N'ihi na ọ hụrụ ha n'anya ma gwọọ ha, ha kpogidere Ya n'obe.
Jizos nwere nkwa di uku nye gi, na obu ezie na ndi mmadu kwesiri imekpa gi aru, ufodu nime ha gege nti okwu gi dika ha gere ya nti. Dịka okwu ahụ nke Mmụọ nyere ike mere ka okwukwe na ịhụnanya gbasapụ ndị na-anụ ya, otú ahụ ka àmà gị ga-eme ka ndụ ebighị ebi n'ime ụfọdụ ndị na-anụ olu gị. Onye Kraist ọ bụla bụ onye nnọchianya nke Kraịst na ụwa nke iro. Ya mere kwadoro oku gi nke eluigwe.
21 Ma ihe ndia nile ka ha gēme unu n'ihi aham, n'ihi na ha amaghi Onye ziterem. 22 A sị na mụ abịabeghị gwa ha okwu, ha agaraghị enwe mmehie; ma ugbu a ha enweghị ihe ngọpụ maka mmehie ha. 23 Onye nākpọm asì, onye nākpọ kwa Nnam asì.
Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya tupu oge eruo na mkpagbu a na-akpagbu ha ga-awakpo ha n'ihi aha ya. Ndị Juu adịghị atụ anya Mesaịa dị umeala dịka nwa atụrụ, mana onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-anapụta ha n'ọchịchị colonial. Ntuhie a banyere olile anya nke nzoputa ndi ochichi bilitere site n'amagh ama banyere ebube nke Chineke. Ha enweghị ike ịmata ọdịiche dị n'etiti okpukpe na steeti; ha nwere chi agha. Ha amaghi Nna nke Onye-nwe-ayi Jisos, onye bu Chineke nke nkasi obi nile na udo. Ee, Ọ na - ekwe ka agha nke agha - dịka ntaramahụhụ, ma agha ndị ahụ na iwu ndị ahụ adịghị ewuli Alaeze ahụ. Ọ bụ Mmụọ ya na-ewuli ya n'eziokwu na ịdị ọcha.
Kraist biara n'ezobe ihe nke Nna ya n'amaokwu, ma ndi Ju juru ndu nke ihu n'anya na imekorita. Ha na-achụso ihe ike na agha. Mba niile ndị nabatara Kraịst Onye Na-eme Udo na-adaba n'otu mmehie ahụ dịka ndị Juu. Mmehie anyị abụghị ka anyị na mmejọ omume, kama ọ bụ iro anyị na-egosi Chineke na anyị jụrụ Mmụọ nke Udo.
Isi ihe mere madu ji jụ Jizọs, Alaeze ya na udo ya bụ ihe mgbagwoju anya nke ezi Chineke ahụ. Ndị mmadụ na-ele chi ha dị ka ọchịchọ ha si dị. Ma Jizọs mere ka anyị mata Chineke nke ịhụnanya. Onye na-ajụ ịhụnanya ahụ, na-agbaso ụzọ nke ime ihe ike na nrụrụ aka, onye na-ajụ Kraịst, jụ ezi Chineke ahụ.
24 A sị na mụ emebeghị ọrụ n'etiti ha ọrụ ndị ọ na-adịghị onye ọzọ mere, ha agaraghị enwe mmehie. Ma ugbu a, ha ahụwo ma kpọọ m na Nna m asị. Ma nka mere ka okwu ahu we mezu, nke edeworo n'akwukwọ iwu-ha, si, Ha kpọrọm asì n'efu.
Jizos kwuputara na nkwuputa ya banyere Nna nke Chineke gabu ikpe nye ndi nemegide Mo Nso ya, nka na otutu ihe iriba ama ya. Ọ dịghị onye nọ n'ụwa nwere ike ịgwọta dị ka Jisọs, ma ọ bụ chụpụ ndị mmụọ ọjọọ, ma ọ bụ mechie oké mmiri ozuzo ahụ, na-enye ọtụtụ puku mmadụ nri na ịkpọlite ​​ndị nwụrụ anwụ. Chineke na-arụ ọrụ n'ime ya na ihe ịrịba ama na ihe àmà nke ihe e kere eke. Ndị Juu ahụghị ihe ọ bụla dị ịrịba ama na ihe ịrịba ama ndị a n'ihi na ọ dịghị uru ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ uru akụ na ụba ha nwere maka mba ahụ. Ma ka ha na-amata ikike nke ịhụnanya Jisọs, ọrụ ndị a ghọrọ ihe ịsụ ngọngọ n'ihi na ha agaghị ekwere na Nna ahụ. Dika ndi Ju mechibidoro nkpuru obi ha megide odidi nke Mo Nso, otua ka otutu nde mmadu no na ndu nke mo nke nemegide Chineke. Ndị na-adịghị ekwupụta na Kraịst bụ Ọkpara Chineke kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya asị ma ha amaghị Chineke, na-anọgide na mmehie ha, na-ekwulu megide Atọ n'Ime Otu. Ka o sina dị, Jizọs enyeghị ha ntaramahụhụ, kama ọ rụrụ ọrụ ịhụnanya site n'aka ndị ohu ya. Nwanna, kwadebe maka esemokwu ime mmụọ a, na-arịọ Onyenwe gị ike iji ndidi na njikere ịhụ ahụhụ.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, anyị na-ekele gị maka ibi ndụ n'ime atụmatụ gị n'agbanyeghị ịkpọasị ndị mmadụ. Kụziere anyị ịhụ ndị iro anyị n'anya, ka e wee zọpụta ha. Mepee obi nke otutu mmadu ka ha nu olu gi ma mee uche gi, nabatara Mo nke nkasi obi. Na-edu anyị; nye anyị ikike na ndidi.
N'ihi gịnị ka ụwa ji kpọọ Kraịst asị na ndị ọ hụrụ n'anya?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:36 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)